Ambassador Cadow "Ma jirto wax doorashooyin ah oo ka dhici kara dalka ilaa…" – SBC
Ambassador Cadow "Ma jirto wax doorashooyin ah oo ka dhici kara dalka ilaa…"
Ambassador C/laahi Axmad Cadow oo si weyn u yaqaan Siyaasadda Soomaaliya ayaa ka hadlay khilaafka Madaxda sare ee Dowladda KMG ah Soomaaliya u dhaxeeya, wuxuuna sheegay in xaalku marayo meel aad u adag.
“Waxaa la marayaa marxaladdii ugu adkeyd ee ay soo marto taariikhiyan Soomaaliya, khilaafka u dhexeeya madaxda DKMG ahna waa mid aan horay u soo marin Soomaaliya” ayuu yiri Ambassador C/laahi axmed Cadow.
Ambassador-ka ayaa khilaafka Dowladda KMG ah ku tilmaamay in haddii aan la xallin uu dalka dhibaato u horseedayo, wuxuuna si buuxda u qiray in gudaha Soomaaliya xiligaan aysan ka dhici Karin doorashooyin.
“Ma jirto wax doorashooyin ah oo ka dhici kara dalka gudihiisa ilaa laga xaliyo oo heshiis laga gaaro khilaafka dastuuriga ah ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya” ayuu yiri Ambassador Cadow oo sheegay in Madaxweynaha xaq u leeyahay inuu ku celiyo baarlamaanka go’aankii ay ku kororsadeen muddada.
“Xaq ayuu u leeyahay Madaxweynaha inuu ku celiyo baarlamaanka go’aankii ay ku kororsadeen muddada jiritaankooda, hase yeeshee Baarlamaanku haddii uu mar kale isku raacaan isla qodobkaas khasab ayay ku noqonaysaa madaxweynuhu inuu saxiixo, mana noqon karo go’aanka Baarlamaanka mid ansax ah iyadoo uusan saxiixin madaxweynaha,” ayuu yiri Amssador-ka oo sheegay mar kale inaan la qaban Karin iyadoo xamar ay dagaalo ka socdaan ama uu khilaaf u dhaxeeyo madaxda Dowladda KMG ah.
Ambassador-ka ayaa ugu baqay madaxda dowladda KMG ah inay fariistaan oo ay ka heshiiyaan khilaafka iyaga u dhexeeya, wuxuuna sheegay inaysan waxba ku hagaagayn in mas’uul walba uu diido go’aanka mas’uulka kal, wuxuuna wareysigaan uu siiyay idaacadda Shabelle oo ka mid ah idaacadaha ka howlgala Magaalada Muqdihso.
Dhanka kale Ambassador C/llaahi Axmed Caddow ayaa laba jeer oo horay isku soo taagay xilka madaxweynimo ee Soomaaliya, wuxuuna ku sugan yahay iminka dalka Mareykanka.